Xukuumadda Soomaaliya oo beenisay warbixinta QM ee ku lug lahaanshaha ciidan Soomaaliyeed colaadda Itoobiya. - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Xukuumadda Soomaaliya oo beenisay warbixinta QM ee ku lug lahaanshaha ciidan Soomaaliyeed colaadda Itoobiya.
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta, xukuumadda Soomaaliya, Cismaan Abuukar Dubbe, oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa beeniyay warbixinta baaraha guddiga xuquuqul insaanka Qaramada Midoobey oo dhowaan soo saaray taas oo lagu sheegay in ciidan Soomaaliyeed oo tababar loogu qaaday dalka Eritrea ay ka qeybgaleen dagaalkii ka dhacay gobolka Tigraay ee dalka Ethiopia.
Wasiir Dubbe, waxaa uu tilmaamay in ciidanka Soomaaliyeed ee tababarka loogu qaaday dalka Eritrea uusan ka qeybgalin dagaalka Itoobiya isla markaana aaney jirin baahi arrintaas loo qabo.
Wasiir Dubbe ayaa sheegay in dowladda ay dhalinyaro tababar ugu dirtay dalka Itoobiya, balse aysan jirin in laga qyeb geliyay dagaalkii ka dhacay Waqooyiga Itoobiya ee dalkaasi.
Maanta ayaa waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay banaanbax ay dhigaayeen waalidiinta dhalay dhalinyaradaas kuwaas oo dowladda Soomaaliya ugu baaqay in caruurtooda meel lagu sheego, Sidoo kale madaxweynihii hore ee dalka Xasan Shiikh Maxamuud ayaa shalay sheegay in ay madaxda talada dalka haya ay iibsadeen dhalinyaradaas sida uu hadalka u dhigay.